6 ka mid ah Aaladaha ugu Wanaagsan ee Youtube & Video-ga ee Kor loogu qaadayo Aragtidaada | BehMaster
Bogga ugu weyn/YouTube/6 ee ugu Wanaagsan YouTube & Aaladaha Hagaajinta Fiidiyowga si kor loogu qaado aragtidaada
Iyada oo in ka badan 2 bilyan oo isticmaalayaal ah ay soo galaan bishiiba, YouTube waa mid ka mid ah aaladaha warbaahinta bulshada ugu caansan uguna awoodda badan.
Dadku waxay ku qaataan in ka badan hal bilyan oo saacadood YouTube-ka maalin kasta.
Marka, wax la yaab leh maaha in suuqgeynta YouTube-ku uu u qaatay boos caan ah ku dhawaad ​​​​suuq-geyn kasta oo dhijitaalka ah maanta.
Si kastaba ha ahaatee, caqabada inta badan suuqleydu la kulmaan, si kastaba ha ahaatee, waa inay hubiyaan in fiidiyowgoodu ayan lumin malaayiinta la soo geliyo maalin kasta. Dhab ahaantii, 500 saacadood oo xog ah ayaa lagu shubaa YouTube daqiiqad kasta.
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay qaar ka mid ah qalabyada wanaagsan iyo khariidadaha si aad u hubiso in fiidiyowyadaadu ay muuqdaan. Waa kuwan lix aaladood oo YouTube-ka weyn iyo tayaynta muuqaalka kuwaas oo kaa caawin kara kor u qaadista aragtidaada.
1. Qalabka ereyga furaha
Furaha lagu hubinayo in fiidyowyadaada ay daawadaan daawadayaasha saxda ah tiro badan waa in la sameeyo cilmi baaris ereyga muhiimka ah oo waxtar leh.
Waxaad u baahan tahay inaad wakhti fiican geliso si aad u ogaato waxa ay u badan tahay in dhageystayaasha bartilmaameedka ahi ay raadiyaan.
Weedhahan raadinta ayaa kaa caawin doona inaad daaha ka qaaddo mawduucyada ay u badan tahay inay xiisaynayaan. Intaa waxaa dheer, ereyada muhiimka ah ee saxda ah ayaa kaa caawin doona in ay u kaxeeyaan taraafikada ku habboon fiidiyowyadaada.
Qalabka Keyword waa qalab faa'iido leh oo kaa caawin kara inaad ka hesho kelmado muhiim ah oo ku jira kaydka xogta YouTube ee autocomplete.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa gelisaa kelmad ballaadhan oo waxay ku tusi doontaa talooyinka muhiimka ah oo ay la socdaan su'aalo, horudhac, iyo hashtag.
Haddii aad u cusboonaysiiso nooca lacagta ah ($99 bishii), waxa kale oo aad arki kartaa cabbirkooda raadinta, isbeddellada, CPC, iyo xogta tartanka.
Marar badan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku darto duubista shaashadda fiidiyowyadaada, gaar ahaan haddii aad abuurayso sida-, demos, ama fiidiyowyada casharrada.
Si kastaba ha ahaatee, duubista waxa ka dhacaya shaashaddaada adiga oo isticmaalaya casriga ama kamarada waa dhib badan waxayna u ekaan doontaa mid aan xirfad lahayn.
Camtasia waxay ku siinaysaa hab caqli badan oo aad ku duubi karto shaashaddaada oo ay la socoto dhaq-dhaqaaqa mouse-kaaga iyo furahaaga.
Waad tafatiran kartaa duubistaada, ku dari kartaa saamaynta, qoraalada, iyo faallooyinka sida falaadhaha, qoraalada, ama iftiiminta.
Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto sheeko cod ama muusig duubistaada.
Waxaad ku dari kartaa animations ama xitaa waxyaabo is dhexgal ah sida su'aalo fiidyahaan ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay dhegaystayaashu ku ogaadaan YouTube waa sawirka thumbnail-ka oo inta badan, waxay go'aansadaan in la daawado fiidiyaha iyada oo ku xidhan hadba sida uu thumbnailku u soo jiidanayo.
Markaa, waxaad u baahan tahay inaad u abuurto sawir-gacmeedyo xirfad leh, tayo sare leh, oo khuseeya fiidyahaaga si ay kaaga caawiyaan inaad soo jiidato daawadayaasha.
Canva waa wax ku ool ah oo si sahlan loo istcimaali karo aalad nakhshad garaafyo oo aad isticmaali karto si aad u abuurto sawir-gacmeedyo tayo xirfad leh.
Inta badan waa bilaash in la isticmaalo marka laga reebo dhawr astaamood oo lacag ah oo ay la socoto ururin wanaagsan oo asal ah oo bilaash ah, sawiro kayd ah, sawiro, qaabab, iyo qaar kaloo badan.
Aad bay muhiim u tahay in lala socdo kanaalkaaga YouTube faallooyinka isticmaalaha oo uga jawaabto sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Tani waxay kaa caawin kartaa inaad kordhiso ka qaybgalka dhagaystayaasha iyo, kor u qaadida darajadaada iyo aragtidaada.
Si kastaba ha ahaatee, waa arrin adag oo waqti badan qaadanaysa in tan gacanta lagu sameeyo - waxaad u baahan doontaa inaad faallo kasta ka bixiso oo aad ogaato kuwa aan laga jawaabin ama kuwa u baahan jawaabo dheeraad ah.
Waa kan halka uu TubeBuddy kaa caawin karo.
TubeBuddy waa browser bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah u maamusho kanaalkaaga YouTube adigoon u baahnayn inaad u kala beddesho tabs.
Markaad rakibto kordhinta, waxaad shaandheyn kartaa faallooyinka ku jira fiidiyowyada YouTube-ka - kuwa u baahan in laga jawaabo, kuwa u baahan jawaabaha daba-galka ah, su'aalaha, dareen togan, dareen taban, iyo wixii la mid ah.
TubeBuddy waxa kale oo ka mid ah sifooyin kala duwan oo kaa caawinaya in aad wakhti badbaadiso oo aad noqoto mid wax soo saar leh sida isticmaalka jawaabaha qasacadaysan, soo saarista sawir-gacmeedka, ku darista shaashadaha dhamaadka, isdhexgalka muuqaalka, iyo wixii la mid ah.
Waxa kale oo ay kuu ogolaataa inaad cusboonaysiiso kaadhadhka, shaashadaha dhamaadka, ama liisaska-ciyaaraha oo dhan.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale kaa caawin kartaa SEO, horumarinta muuqaalka, iyo baaritaanka xogta iyo tirakoobka.
Si kor loogu qaado aragtidaada fiidyaha oo loo gaadho dhegaystayaal ballaadhan, waa lama huraan in lagu wadaago fiidiyowyada YouTube-ka baraha kale ee warbaahinta bulshada.
DrumUp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kor u qaaddo fiidyahaaga isla mar ahaantaana dhammaan goobaha sida Instagram, Facebook, iyo LinkedIn adigoo hal gujin ka helaya madal si fudud loo isticmaali karo.
Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa in aad astaysto fariimahaaga madal kasta ka hor inta aan la wadaagin iyo xataa ka mid ah sifo auto-boos ah.
vidIQ waa aalad kale oo waxtar u leh YouTube oo lagu hagaajinayo arsenalkaaga.
Waxay ku siin kartaa fikrado awood leh oo ku saabsan cidda daawanaysa fiidyahaaga si aad u abuurto waxyaabo ku habboon dhageystayaasha bartilmaameedka u ah.
vidIQ waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato wakhtiga ugu habboon ee aad daabacdo macluumaadkaaga waxayna ku siin kartaa fikrado kale oo faa'iido leh oo ku saabsan fiidiyowyadaada iyo kanaalkaaga.
Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad aragto sida aad uga soo horjeedo tartamayaashaada.
Fidinta biraawsarkaaga vidIQ ee bilaashka ah ee Google Chrome ayaa kuu ogolaanaysa inaad si toos ah uga aragto tartamayaashaada aragtidooda, ereyada muhiimka ah ee ugu sareeya, sumadaha, iyo cabbirada kale ee raadinta si toos ah browserkaaga.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa vidIQ si aad u ogaato ka qaybgalkaaga Facebook iyo Twitter iyo sidoo kale si aad ula socoto calaamadayntaada.
Furaha suuqgeynta guusha leh ee YouTube waa:
Si joogto ah u samee tayada-xirfadeedka, fiidiyowyada khuseeya ee ku salaysan cilmi-baarista ereyga muhiimka ah.
La qaybso dhagaystayaashaada
Ka gudub macluumaadkaaga guud ahaan aaladaha kale ee warbaahinta bulshada.
Qalabka kor lagu soo sheegay ayaa kaa caawin kara inaad dhammaan hawlahan si fudud u maamusho.
4 Sababood oo Fiidiyowyadaadu aanay u guulaysan sida qoraaladaada Blog-ga
Waa maxay sababta ay tahay inaad u barato waxaad ka ogtahay Algorithm-ka YouTube
15 Dhiirigelinta Fiidiyowga YouTube si aad u dhisto astaantaada
Dhammaan shaashadaha uu qaaday qoraaga, Oktoobar 2019
Sida Loo Sameeyo Warsidaha Iimaylka (iyo sababta aad u baahan tahay)